OTU ESI EWEPUTA DOCX KA DOC - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Kaadị vidiyo ọ bụla chọrọ software. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka usoro AMD Radeon R7 200 abụghị ihe siri ike dịka o nwere ike iyi ka ọtụtụ ndị ọkachamara na-enweghị ahụmahụ. Ka anyi gbalịa ịghọta nsogbu ahu karia.
Usoro ntinye software maka AMD Radeon R7 200 usoro
Enwere ụzọ dị irè maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo AMD. Otú ọ dị, ọ bụghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịrụ maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, yabụ na ịkwesịrị iwepụ nke ọ bụla.
Achọọ ọkwọ ụgbọala ọ bụla ị ga-amalite na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta. Ọ bụ n'ebe ahụ na ọtụtụ mgbe enwere nsụgharị nke ngwanrọ nke onye ọrụ chọrọ.
Gaa na ụlọ ọrụ weebụ nke AMD ụlọ ọrụ.
Na isi mmalite nke saịtị ahụ anyị na-ahụ ngalaba "Ndị ọkwọ ụgbọala na Nkwado". Mee otu pịa.
Ọzọ, malite usoro ọchụchọ "aka". Nke ahụ bụ, anyị na-egosi ihe niile data na kọlụm pụrụ iche na nri. Nke a ga-enye anyị ohere izere ihe nbudata na-enweghị isi. Anyị na-akwado itinye data niile, ma e wezụga nsụgharị sistemụ, site na nseta ihuenyo n'okpuru.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ka na-agbanye bọtịnụ ahụ "Download"nke dị na nsụgharị kachasị ọhụrụ.
Ọzọ, ọrụ ga-amalite maka AMD Radeon Software Crimson software. Nke a bụ ezigbo ngwá ọrụ maka imelite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala, na weebụsaịtị anyị, ị nwere ike ịgụ isiokwu dị ugbu a na usoro ihe omume ahụ.
Gụkwuo: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na AMD Radeon Software Crimson
Na nyocha nke usoro a zuru ezu.
Usoro 2: Njirimara ọrụ
Ugbu a bụ oge ikwu banyere ọrụ enyemaka, bụ nke na-ekpebiri onwe ya na vidiyo vidiyo na ibu onye ọkwọ ụgbọala maka ya. Naanị ibudata ya, wụnye ma gbanye ya. Ma banyere ihe niile na nkọwa.
Iji chọpụta ọrụ na saịtị ahụ, ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ niile ahụ dị ka usoro 1, mana naanị ruo na gụnyere ihe nke abụọ.
Ugbu a, anyị nwere mmasị na kọlụm nke dị n'aka ekpe nke ọchụchọ ntuziaka. A na-akpọ ya "Nchọpụta na ntinye aka nke onye ọkwọ ụgbọala". Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Weghachị faịlụ na ndọtị .exe. Naanị ị ga-agba ọsọ ya.
Ọzọ, a na-enye anyị ohere ịhọrọ ụzọ iji wụnye ngwa ahụ. Ọ ka mma ịhapụ onye ahụ edere ya na mbụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, nkwụsị nke faịlụ ndị bara uru dị mkpa ga-amalite. Naanị cheretụ ntakịrị.
Ozugbo emechara ihe niile, a na-emepụta ọrụ ahụ ozugbo. Mana nke mbụ ị ga-achọ ịmara onwe gị na nkwekọrịta ikike, ma ọ bụ pịa nanị "Nabata ma wụnye".
Naanị mgbe ahụ ka ọchịchọ ngwaọrụ ga-amalite. Ọ bụrụ na ọ na-aga nke ọma, a ga-akpali gị ịwụnye ọkwọ ụgbọala ahụ. N'ịgbaso ndụmọdụ ahụ, ọ ga-adị mfe ime.
Nke a mezue usoro ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala, site n'iji njirimara pụrụ iche, emechaa.
Usoro nke atọ: Usoro nke atọ
Ebe ọrụ ahụ abụghị naanị ụzọ iji dozie nsogbu ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala. Na netwọk, ị nwere ike ịchọta mmemme na ịnagide ọrụ nke ịwụnye ngwanrọ dị otú ahụ karịa karịa ụlọ ọrụ pụrụ iche. Ha na-achọpụta ngwaọrụ ahụ na-akpaghị aka, budata onye ọkwọ ụgbọala maka ya, wụnye ya. Ihe niile dị ngwa na mfe. Ị nwere ike ịmatakwu ihe omume dị otú ahụ na weebụsaịtị anyị, n'ihi na ebe a ị ga-ahụ otu akụkọ dị ebube gbasara ha.
Gụkwuo: Nhọrọ nke ngwanrọ maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Otu n'ime mmemme kachasị mma nke nke a bụ Driver Booster. Nke a bụ software ebe onye ọrụ na-enye ihe doro anya na interface na nnukwu online nchekwa data nke ọkwọ ụgbọala.
Ka anyi gbalịa ịghọta ya karia.
Mbụ, mgbe ị na-agba akwụkwọ faịlụ ahụ, ịkwesịrị ịgụ ọgbụgba ikikere. Ọ ga-ezu iji pịa "Nabata ma wụnye".
Ọzọ ga-amalite usoro nyocha. Anyị agaghị enwe ike ịmepe usoro a, ebe ọ bụ na ọ bụ iwu. Naanị ichere ka ọ mezue.
Ihe omume dị otú a bara uru, ebe anyị na-ahụ ozugbo ebe ihe na-adịghị ike na ngwanrọ kọmputa.
Otú ọ dị, anyị nwere mmasị na kaadị vidiyo dị otú ahụ, ya mere, na ebe nyocha ahụ, nke dị n'akụkụ aka nri n'elu, anyị na-abanye "Radeon R7".
N'ihi ya, ngwa ahụ achọtara anyị ozi gbasara ngwaọrụ achọrọ. Ọ na-anọgide na pịa "Wụnye" ma chere ka onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ rụchaa.
N'ikpeazụ, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Ngwaọrụ ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ pụrụ iche nke ya. Site na ID ọ dị mfe ịchọta onye ọkwọ ụgbọala nwere ike, ọ chọghịkwa ka echichi nke mmemme ma ọ bụ ihe ọrụ. Site n'ụzọ, ihe njirimara ndị a dị mkpa maka kaadị AMD Radeon R7 200 dị na vidiyo:
Na njikọ dị n'okpuru ị nwere ike ịgụ ntụziaka zuru ezu banyere otu esi eji ha, nke ihe niile dị mfe ma dị mfe.
Usoro 5: Standard Windows Ngwaọrụ
Maka ndị na-adịghị amasị ịwụnye mmemme nke atọ, chọọ ihe na Ịntanetị, saịtị nleta, usoro a kwesịrị ekwesị. Ọ dabere na ọrụ nke ngwaọrụ Windows. Mgbe obere manipulations, ị nwere ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala nke ga-emejupụta ngwaike arụnyere na kọmputa gị. Ọ dịghị mkpa ịkọwa nke a n'ụzọ zuru ezu, ebe ọ bụ na a kọwawo ihe niile n'otu isiokwu na weebụsaịtị anyị, nke ị nwere ike ịgụ mgbe niile.
Ihe mmụta: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji ngwaọrụ Windows
Nke a na-akọwa usoro ọrụ niile ga - enyere gị aka ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala maka kaadi AMD Radeon R7 200. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịjụ ha na ihe ndị dị n'okpuru isiokwu a.